Abathengi abaninzi baya kubuza ukuba zingaphi izihlandlo zokutshintsha izixhobo zesikrufu xa bathenga? Kubonakala ngathi ingqalelo yomsebenzisi kule ngxaki iphezulu kakhulu. Namhlanje, kweli thuba, ndingathanda ukuphendula le mibuzo ngokweenkcukacha. Hlalutya ngononophelo, izixhobo zeendaba zeoyile ...
Ukusetyenziswa kweoyile 1. Yitya. Sesinye sezona zondlo zintathu ziphambili (iicarbohydrate, iprotein kunye neoyile) ekufuneka umzimba womntu ungasweli. Ukusetyenziswa yenye yeempawu zomgangatho wokuphila. Ukubonelela ngamafutha acid, iivithamini ezinyibilikayo ezinamafutha kunye neemeko zokufakwa kweevithamini ezinamandla, amandla, ukuphucula ...
Zininzi iindlela ezahlukeneyo zokufumana ioyile yemifuno. Umzekelo wendlela yokucinezela yomzimba, indlela yokucinezela ngesanti kubunzulu baphantsi, indlela yokusombulula isinyibilikisi njalo njalo. Inkqubo yokucinezela yomzimba ebonakalayo ine-cofa ixesha elinye kwaye cinezela kabini, umatshini oshushu kunye nomatshini wokubanda. Ngaba uyazi ukuba yintoni umahluko phakathi ...
iveliso ezifakiwe, Imephu yendawo, Zonke iiMveliso Umatshini wokushicilela ioyile, Ingqele Cofa Umatshini weoyile, Umatshini wokushicilela weoyile encinci, Imbewu yeNtengiso yeoyile, Umthengisi weoyile, Imithombo yeendaba yeoyile yeOlive,